Rasaasa News – Salaadii Ciida Magaalada Jijiga oo Masjidul Aqsa Noqotay!
on August 19, 2012 4:54 pm
Jijiga, Aug 19, 2012 [ras] – Sabab keentayba muslimiinta Ethiopia, ayaa maalmaha ciida waxay salaada ku tukadaan hal meel, hal mar oo kaliya, inta ay doonto tirada dadku ha la ekaatee. Arinkaas oo ayna dunida kale ee Muslinku la qabin.
Magaalada Jijiga oo ka kooban 10 xaafadood oo waawayn aadna u kala durugsan, ayaa waxaa ku nool qiyaastii dad ay tiradoodu kor u dhaafayso 1,300,000. Dadka muslinka ah ee ku nool magaalada, ayaa qiyaastii noqonaya 95%, Boqolkiiba 5% waa masiixi.
Waxaa saaka salaadii ciida u dareeray magaalada Jijiga qiyaastii tiro dhan 700,000 oo ruux. Waxaa sanad walba lagu tukadaa barxad wayn oo u dhexaysa xarunta maamulka ee Dawlada degaanka Somalida iyo Iskuul aad u wayn.
Waxaa la yaab leh in Masaajidada magaalada Jijiga kuligood la xidho sallaada ciida, lana wada aado barxada aan sheegnay, iyada oo aan dan laga galin dadka aan socodka dheer gali karin sida caruurta, dadka da,ada ah iyo kuwa bukaan socodka ah oo kuligood jecel in ay tukadaan sallaada ciida.
Waxaa iyana la yaab leh in barxada lagu tukado ciida ee magaalada Jijiga si wayn ay amaankeeda u ilaalinayaan ciidamo badan oo degaanka ah. Dadwaynaha tiradaas leh waxaa lagu sameeyaa baadhid inta ayna galin barxda salaada ciida lagu tukado, waxaana loo baadhaa si adag.
Waxaa aad u adag in la galo xerada tirada iyo baadhiga adaga e lagu samaynayo dadka awgeed oo ku qaadata saacado in aad gasho barxada sallaada, waxaadna gudaha gali adiga oo daal la hiiqsan.
Waxaan ku qiyaasay arimaha ka jira barxada sallaada ciida ee magaalada Jijiga Masjidul Aqsaha Jurusalaam.
Waxaan iswaydiiyey labo su,aalood; a) Maxaa kalifaya in hal meel magaalada oo dhan hal mar ku tukato b) Maxaa keenay in si adag loo baadho dadweynaha doonaya in ay tukadaan sallaada ciida?
Jawaabta su,aasha dambe waxay noqotay in masuuliyiinta dawlada degaanku ay ku tukadaan sallaada ciida barxadaas lana ilaalinayo nabad galiyadooda.
Jawaabta kale, waxaa la iigu sheegay in masjidul calaaga Ethiopia, gaar ahaan kan degaanku uu maalinta ciida ka helo dhaqaale xoog leh, taasina ay tahay sababta loogu qasbay dadweynaha in ay hal meel iyo mar qudha ciida tukadaan.
Subixii saakahaa waxaan indhahayga ku arkayey dadweyne cadhaysan oo dib uga laabanaya barxada sallaada ciida, iyaga oo leh waanu faraxsanayne way naga cadheeyeen. Waxaa kale oo aan arkay dadweyne meel banana ah kolkii ay baxda galeen sallaadii iskood ugu tukanaya. Waxaa kale oo aan arkay qaar ka mida masaajidada Jijiga oo xili dambe loo furay tukashada sallaada ciida, waxayna ii sheegeen in ay ka baqayaan in wax loo dhimo hadii la ogaado arinkaas.
Isku soo duuboo waxaa caqliga ka fog in magaalada Jijiga oo aad u kala fog dadweyne badana ku nool yihiin in ay hal meel hal mar ku tukato. Waxaa iyaduna xun in dadweynaha sallaada tukanaya ee meel kale oo ay ku tukadaan ayna jirin baadhid adag lagu sameeyo, taas oo keeni karta in dadweyne badani joojiyaan sallaada ciida ama ay sameeyaan mudaharaad uu sababay cadaadiska la saaray.
Sheekh Rashiid Maxamuud